တစ်ရက်ပဲ! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 13, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ဂျုံးစ်ဆိုဒါမှစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သမီးကယနေ့ဖုန်းဆက်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီမယုံနိုင်စရာပါ! ငါထုံးစံအပေါ်လုပ်ခဲ့တယ်သောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကြှနျုပျ၏ဂျုံးစ်ဂီတ MP3 ဖွင့်စက်အသားအရေ, ဂျုံးစ်သည်ကျေးဇူးတင်သောအထုပ်တစ်ခုလွှတ်လိုက်သည်။ ဝိုး! ၎င်းတွင်ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အချို့သောစကပ်ကပ်များ၊ အခြားစတစ်ကာများ၊ သော့ချိတ်၊ နှုတ်ခမ်းနီနှင့် pin တစ်ချောင်းပါရှိသည်။ ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းလုံလောက်စွာမပြောနိုင်ပါ။ ဒီလိုလမ်းမှထွက်ဖို့တကယ်ပြောတာ။ ဂျုံးစ်ဆိုဒါသောက်ပါ !!!
ကျွန်တော့်ကားကိုလမ်းလျှောက်ရင်းလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ဆီကိုထိမိပြီးထိမိခဲ့တယ်၊ သူ့ညာဘက်အခြမ်းကဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်လိုက်တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုဓားဖြင့်ထိုးတယ် ငါသူ့ကိုလမ်းဘေးအပေါ်ချ။ သူ၏ရှပ်အင်္ကျီဆွဲထုတ်။ သူကသူ့ဘေးမှာဓါးဒဏ်ရာ ၂ ခုကနေသွေးတွေထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာဘာကိုင်စရာမှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုနှိပ်ပြီးရဲကိုနောက်တစ် ဦး နဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ သူသည်နာကျင်မှုအနည်းငယ်နှင့်သွေးအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူနာပြုများရောက်လာပြီးဆေးရုံသို့အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါသူ့အသက်ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်ကိုင်ထားပြီးသွေးထွက်တာဟာအများအားဖြင့်ရပ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကစားသောက်ဆိုင်ကနေသန့်ရှင်းတဲ့အထည်ပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါသူနာပြုသူကတဆင့်ဆွဲရန် 50/50 အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသူ၏အမည်မှာဒေးဖြစ်ပြီးသူမှာအသက် ၅၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အချိန်တွင်ရဲတွင်ဓားဖြင့်ထိုးသတ်သူကိုမျက်မြင်သက်သေ ၂ ယောက်ရှိပြီးဓားကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ Dale လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲမသိဘူး။ Dale အတွက်ဆုတောင်းပေးပါ
ဒီတော့ ... တစ်ရက်! ငါမှန်ကန်သောအချိန်၌ငါမှန်ကန်သောနေရာ၌ရှိ၏သောကြောင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ငါဒေးလ်ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခြားကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စားပွဲထိုးကသန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်အစားတစ်ချောင်းပေးခဲ့တယ်။ ဒါကအင်ဒီယာနာပိုလစ်စ်ရဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ထောင့်မှာအနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာပါ။ ငါသည်ငါ့ကားတစ်စီးမှနှင့်နေ့တိုင်းထိုလမ်းဘေးလမ်းလျှောက်။
Update ကို - ဒီမှာ ရဲအစီရင်ခံစာ.